Ciidamo Tababar loo geeyay Wadanka Canada Oo Magengelyo siyaasadeed dalbaday.
Xoogag Jihaadi ah oo dilal ka geystay Suuq Bacaad iyo deegaanka Garasbaaleey.
Wednesday January 09, 2019 - 11:57:36 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Xilli ay xoogaga ka dagaallamaya wadanka Maali sare uqaadeen camaliyaadka jihaadiga ah oo ay ku beegsanayaan ciidamada dowladaha dabadhilifyada mandiqadda saaxilka iyo kuwa dowladda faransiiska ayay soo baxayaan warar sheegaya in ciidamada qaar ay fu
Xilli ay xoogaga ka dagaallamaya wadanka Maali sare uqaadeen camaliyaadka jihaadiga ah oo ay ku beegsanayaan ciidamada dowladaha dabadhilifyada mandiqadda saaxilka iyo kuwa dowladda faransiiska ayay soo baxayaan warar sheegaya in ciidamada qaar ay furimaha dagaalka mandiqadda isaga firxanayaan.
Boqolaal askari oo katirsan kuwa xukuumadda dabadhilifka Maali ayaa lagu la'yahay wadanka Kanada ee dhaca waqooyiga qaaradda America kadib markii halkaas loo geeyay tababar melleteri si ay ula dagaallamaan muslimiinta kunool waqooyiga Maali.
Dowladda kanada ayaa ku dhawaaqday in ciidamo gaaraya 200 oo askari ay ka dhuunteen xeryihii lagu tababarayay ayna dalbadeen magangelyo siyaasadeed.
Ciidamadan ayaa loo carbinayay ladagaallanka waxa loogu yeero argagaxisada balse waxay diideen in wadankooda dib loogu celiyo, shabakadda Sahra Media ee laga leeyahay wadanka muritaaniya ayaa sheegtay in ciidamadu ay ku dhuunteen gudaha kanada.
Warbaahinta maxallliga wadanka Kanada waxay sheegtay in ciidamadan ay ahaayeen kuwa ilaaliya madaxtooyada una tababaran ka hortagga weerarada jihaadiga ah ay cagaha wax ka dayeen.
Xukuumadda Maali ayaa maalmihii lasoo dhaafay warbaahinta ka qarinaysay khabarkan balse mar dambe ayaa la ogaaday in dhammaan ciidamadu ay baxsadeen oo gudaha wadanka Kanada ay ku dhax dhuumanayaan.
wargeyska "The Star Canada" oo soo xiganaya saraakiisha laamaha socdaalka ayaa sheegay in 80 kamid ah ciidamada Maali waraaqaha ay ku codsanayaan magangelyo siyaasadeed ay ugudbisteen dowladda kanada waxayna ku andacoodeen in ay ka sheeganayaan dhibaatooyin ay kala kulmeen dagaallada gaar ahaan weerarada uga imaanaya ciidamada Jamaacada ugargaaridda islaamka iyo muslimiinta ayna khatar gelayso noloshooda haddii ay dib ugu laabtaan wadankooda.
Askartan isdhiibtay ayaa dowladda Kanada usheegay in naftoodu khatar ugu jirto weeraro uga yimaada jihaadiyiinta ku xiran Ururka Alqaacidda, arrintan ayaa fadeexad ku ah xukuumadda taagta daran ee kajirta wadanka maali ee dhaca galbeedka qaaradda Afrika.
Deegaanno katirsan dhulka Soomaaligalbeed iyo wadanka Tanzaaniya oo laga arkay bisha Shawwaal.
Ciidamo katirsan maamulka 'Puntland' oo ka goostay saldhigga Af Urur.
Dagaal khasaara dhaliyay oo ciidamo kawada tirsan dowladda ku dhaxmaray degmada Wadajir.
Askari lagu tababaray saldhigga Balidoogle oo Muqdisho lagu dilay.
Ciidamada Xukuumadda Alwifaaq oo hareereeyay magaalo kutaal wadanka Liibiya.
Ruux hubaysan oo 16 qof ku dilay toogasho ka dhacday dalka Canada.